Hiresaka Momba ny Elefanta Ahiana ho Lany Tamingana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2015 9:39 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, 简体中文, русский, Italiano, English
Tamin'ny 12 aogositra no nankalazana ny Andro Manerantany ho an'ny Elefanta. Namondrona ny heriny ireo vondrona isankarazany hampiely ny fanaitairana momba ny fihenan'isan'ny elefanta noho ny fihazana azy ireo, ny fanimbana ny toera-ponenany am-pirenirenena ary ny famarotana tsy ara-dalàna ny vangin'elefanta. Ity no andiany fahaefatry ny Andro Manerantany ho an'ny Elefanta fanao isan-taona :
Ampirisihana ihany koa ny mpanjifa sy ny mpizahatany hitadidy ireto fikafika sasantsasany ireto rehefa mividy zavatra na rehefa mitsidika firenena mampiroborobo ny fizahantany amin'ny alalan'ny elefanta:
Tombanana fa 400.000 sisa ny elefanta Afrikana mirenireny. Mandritra izany fotoana izany dia tokotokony ho 35.000 ny elefanta aziatika sisa tavela ary efa heverina ho karazam-biby ahiana ho lany taranaka izy ireo.
Ao Laos, izay fanta-daza ho ‘tanin'ny elefanta an-tapitrisany’, elefanta 300 ka hatramin'ny 600 sisa niangana.
Tamin'ny alalan'ny #elegram [soritra elefanta] ny mpisera aterineto no namoaka ireo fandokondokoana, kisangisangy, sary azo atao famantarana ary sangan'asa momba ny elefanta:
Eto ambany ny tsanganana #elphie [sary miaraka amin'ny elefanta]:
Sarin'i @SqrrlGrrl ao amin'ny Fitehirizam-bibin'i L.A. [ateveno ny andian'elefanta]
Asehon'ny lahatsary #JoinTheSTAMPede ireo olona tsirairay mandray anjara eny an'arabe ho fanohanana ny fanentanana #SaveElephants [Avoty ny elefanta]. Mandritra izany fotoana izany ny diezy #WorldElephantDay manolotra torohay misongadina momba ireo fomba isan-karazany mety hahalany tamingana ny elefanta:
John Calvelli, avy amin'ny Wildlife Conservation Society, nampahatsiahy ny mponin'i Etazonia fa afa-manakana ny varotra vangin'elefanta ry zareo: